Efa hatramin'ny ela ny akanjo mena dia tena sarobidy noho ny fahafahana manadio haingana sy manadio ny ra, manambany, mampitsahatra ny fivoaran'ny tumors. Ireo mpihetsika ireo dia mampiasa fomba amam-panafody sy voninkazo mahavoky an'io zavamaniry io amin'ny famokarana tinctures, fanesorana sy fiomanana eo an-toerana avy amin'ny aretin'ny aretim-po. Ankehitriny, ampiasaina be dia be ny akorandriaka marefo - efa nodinihina tsara ny fanasitranana ny herja, izay ahafahana mamokatra fanafody mahomby indrindra avy amin'izany.
Ny fanasitranana ny tanimbolin'ny clover
Ao amin'ny lohan'ny voninkazo, ary koa ny ravin'ny zavamaniry dia misy vitamina avy amin'ny vondrona samihafa, flavonoids, mineraly, oils essentiales, asidra cuminique, asidicilic acid and carotene. Izany rehetra izany dia miteraka vokatra tsara avy amin'ny fampiasana zava-mahadomelina amin'ny clover:
ny anti-milaza zavatra;
Ankoatra izany, ny singa ao amin'ny zana-kavoana dia manampy amin'ny fampitomboana ny asan'ny rafi-pitabatabana, ny fanamafisana ny hery fiarovana, ny fisorohana ny aretina.
Ny fanasitranana ny ahitra Grass Clover sy ny fanoherana
Noho ny firaisana tsy manam-paharoa sy ny zavatra voalaza etsy ambony, ny akanjo mena dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretina manaraka ao amin'ny vatana:
ny psykolojia ny voa sy ny rafitra urine;
Ny aretina afindrana amin'ny fanakanana ny fantson-dra;
rà milamina loatra;
ny fery, ny moka, ny vavony
aretin'ny haitao (ulcers, akne, lozam-pandaminana);
ny areti-maso sy ny aty;
Na dia eo aza ny tsy fisian'ny toaka poizina ao amin'ny ravina sy ny voninkazo vita amin'ny clover, dia misy ny fanoherana ny fandraisana azy:
ny fitomboan'ny rà;
Fomba fitsaboana sy fampiharana ny akanjo lava
Misy fomba maro ampiasaina amin'ny fampiasana anatiny sy ivelany amin'ny toeram-pitsaboana.
Fampidiran-drà mafana amin'ny fitantanana orinasa:
Ho an'ny ranom-piravoana 1 lany, dia makà lasitra mofomamy misy volom-borona mena na maina.
Atsofohy 1 minitra ny fitaovana fanondrahana.
Mialà adiny iray, afeno amin'ny takelaka iray.
Mangetaheta, atsipazo ao anaty tavoahangy glasy na tavoahangy.
Misotroa aorian'ny sakafo, in-telo isan'andro, 75 ml isaky ny iray.
Raha te hividy fanafody avo lenta kokoa ianao, raha tokony ho 1 isa-haingon-tsakafo, dia azonao atao ny mandray roa.
Ny tohin'ny zava-pisotro misy alikaola dia manana toetra mahasoa maro:
Esory ny felam-banton'ny menaka.
Apetraho ao anaty kapoaka vita amin'ny vilany 500 ml ny vokatra.
Manodidina ny latabatra boriborintany 4 mivoaka ny alikaola, mihena amin'ny rano amin'ny 40%. Afaka mampiasa vodka tsara ianao.
Tohizo ny vahaolana mandritra ny 10 andro, mametraka izany amin'ny toerana mafana.
Mangataha, misotro dipoavatra alohan'ny sakafo.
Ny fitaovana natolotra dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fomba ivelany - famoretana, fanosehana ary lozisialy amin'ny fitsaboana aretim-pihetsiketsehana amin'ny ati-pandehan'ny aretina. Ny soso-kevitra dia ny hampifangaro io fitsaboana io amin'ny jiokom-bovoka vaovao, mipoitra avy amin'ny ravina sy voninkazo.
Anisic lofant - fananana medikaly
Jaundice - fananana ara-pahasalamana sy fanoherana ny herisetra amin'ny endriky ny fanesorana sy ny tinctures
Cedarwood - fampiharana
Fanoratana ny lilac
Bitner's Balm - fampiharana
Akupuncture - fifanoherana
Ny savony tar - fampiasana sy tombontsoa amin'ny tarehy sy ny vatana
Fiterahana an-tsokosoko ho an'ny kohaka - 13 fomba mahomby indrindra
Sakafo maimaim-poana - fananana mahasoa sy fanoherana, resipe
Ahoana no fomba fanaovana tolo-kevitry ny propolis ao an-trano?
Zavona ahitra - fampiharana
Fanaraha-maso ny ovy
Sakafo feno pancakes
Ahoana no ahafahako matevina?
Tonta ho an'ny tovovavy
Ny uterine ny uterine Nodal
Cat food "Yams"
Fomba entina mandefitra ho an'ny saka?
Mofomamy mofomamy ao anaty oven mikrofo
Manintona nofinofy amulet
Andro iray amin'ny zaza misy ankizy
Famoahana zaza vao teraka